မရှိတာထက်…မသိတာခက် by ansoe | Steem
မရှိတာထက်…မသိတာခက် by ansoe
myanmar · @ansoe · May 12 '19
![mashitar htet copy.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmWCJ1GKSoVcMNRnbQvfHxyTVy36NN6YZDT1thMYZ1vivP/mashitar%20htet%20copy.png)
စာရေးမယ်လို့ စိတ်ကူးလိုက်တိုင်း အာရုံပျက်မယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေ ၀င်လာတတ်တော့ စာမရေးဖြစ်ဘူး ဖြစ်နေပြန်တယ်။ စိတ်အာရုံသွင်းမရပဲ ရေးချင်ရာလျောက်ရေးချင်စိတ်လည်းမရှိ၊ လူတစ်ယောက် ကိုယ်ရေးတဲ့စာ ကိုလာဖတ်ရင် တစ်ယောက်တော့ အကျိုးရှိသွားနိုင်ပါစေဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ စာတွေကို ရေးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ တကယ်အကျိုးဖြစ်မဖြစ်ကတော့ စာလာဖတ်တဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ပဲ သိလိမ့်မယ်။ နေ့စဉ် နေ့တိုင်းမှ ဥစ္စာ၊ ပညာ၊ အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေကောင်း တစ်ခုခုတိုးသင့်တယ်လို့ ဆိုလေတော့ စာကို အချိန်ပေးဖတ်သူအတွက် အတွေးလေးတစ်ခုတော့ ရစေချင်တာ ဆန္ဒအမှန်ပဲ။ ဒီတော့ စာရေးမယ်ဆိုရင် အာရုံမရင် ရေးမရဖြစ်နေတတ်တယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာလည်း ငါရေးတဲ့စာတွေထဲကအတိုင်း ငါကိုယ်တိုင်ကော လိုက်နာနိုင်ပါရဲ့လားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မေးခွန်းပြန်မေးမိတဲ့အခါမှာလည်း ထွက်လာတဲ့အဖြေကတော့ လိုက်နာမှုနည်းပါးတယ်ဆိုတာ အဖြေပြန်ရနေဆဲပါပဲ။ ကိုယ်မလိုက်နာနိုင်သေးပေမယ့် လိုက်နာနိုင်သူတွေ အကျိုးတစ်ခုဖြစ်စေမယ်ဆိုရင် ၀မ်းသာစရာပါပဲ။ အခုလည်း လူအများပြောပြောနေတတ်ကြတဲ့ စကားတစ်ခွန်းဖြစ်တဲ့ မရှိတာထက် မသိတာခက် ဆိုတဲ့စာသားလေးကို ရေးချင်စိတ်ပေါက်လို့ ရေးတင်မိပါတယ်။ ဒီစာကိုလည်း ရေးချင်နေတာအတော်ကြာပေမယ့် မရေးဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ခုတော့ ရေးဖြစ်ပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါပြီ။ တတ်သမျှ မှတ်သမျှ ဖတ်ဖူးသမျှ မှတ်ဖူးသမျှ ရသမျှ ကိုယ့်အတွေးလေးတွေနဲ့ ဆွဲထုတ် မျှဝေခြင်းဖြစ်လို့ တိုက်ဆိုင်မှု မရှိခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်ကြစေချင်ပါတယ်။ အတွေးတူလို့ ကြိုက်တယ်ဆိုရင် ယူလိုက်ကြပါ။
![mashitar htet 3.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmbJWdc5kEC11WUJHDBVeXH2hwWByUTfHfQ4WqpDgXZvyK/mashitar%20htet%203.png)
မရှိတာဆိုတာကို ဒီနေရာမှာ အခြားအရာတွေထက် ပစ္စည်းဥစ္စာမရှိခြင်းကိုပဲ ရေးချင်ပါတယ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာမရှိခြင်း က လုပ်ယူလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုတစ်စု ပစ္စည်းဥစ္စာ မရှိဘူး၊ မချမ်းသာဘူးဆိုကြပါစို့။ မိသားစုတစ်စုလုံးက ချမ်းသာစေတဲ့နည်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာရရှိစေမယ့်နည်းတွေကို အားလုံးအတူတကွ ဖြေရှင်းလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ ဥစ္စာပစ္စည်းရှိချင်ရင် ရှိအောင်လုပ်ဖို့အတွက် မခဲယဉ်းနိုင်ဘူးလို့လည်း ယူဆထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိသားစုမှာ ပါဝင်နေတဲ့ မိသားစုဝင်တွေအားလုံးကတော့ စည်းလုံးရမယ်၊ ညီညွတ်ရမယ်၊ ပစ္စည်းဥစ္စာကို ပေးနိုင်တဲ့ အလုပ်ကို မပျင်းမရိ စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ကိုင်ကြရမယ်၊ အဖြုန်း နဲ့ အသုံးကို သေချာ နားလည်နေကြရမယ်၊ စီးပွားရေးကို ဦးဆောင်သူရဲ့ စကားကို လိုက်နာရမယ်။ ဒါလောက်ဆိုရင်တော့ မိသားစုတစ်စုအတွက် ဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာ မခဲယဉ်းလောက်ပါဘူး။ မရှိသေးတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကို ရှိလာအောင် လုပ်ကိုင်နိုင်ပါတယ်။ စီးပွားဥစ္စာမရှိလို့ မိတ်ဆွေကောင်းတွေ၊ မိသားစုအသိုင်းအ၀ိုင်းတွေက ကူညီ ဖေးမပေးနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ စီးပွားပညာရှိအောင်လုပ်ဖို့အတွက် ဒီခေတ်ကာလကြီးမှာ မခက်ခဲတော့ပါဘူး။ အခမဲ့ပညာဒါနတွေ၊ အခမဲ့ အသက်မွေးပညာတွေကို သင်ကြားပေးနေတဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတော်များများလည်း ဖြစ်ထွန်းတည်ရှိနေပါပြီ။ ဥစ္စာပစ္စည်းမရှိခြင်းအတွက် ဥစ္စာပစ္စည်းရှိအောင် ၀ိုင်းဝန်းကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ မရှိတဲ့ ဥစ္စာပစ္စည်းကို ရှိအောင်ရှာဖွေဖို့အတွက် မခဲယဉ်းနိုင်ဘူးဆိုတာကို နားလည်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
![mashitar htet 2.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmS8AjrQS1fkCr1Yw4gADPE8eLmo2ybtues4PhjvjowdPS/mashitar%20htet%202.png)
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်ရေးချင်တဲ့ မသိခြင်းဆိုတာကတော့ သိသင့် သိထိုက်တဲ့အရာတွေကို မသိခြင်း တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင် အသိပညာကို မသိခြင်းကိုပဲ ရေးလိုပါတယ်။ သိစရာတွေ တတ်စရာတွေများလွန်းတဲ့ ခုလို အိုင်တီခေတ်ကြီးထဲမှာ ဘာကြောင့် အသိတရားကို ရေးသလဲဆိုရင် အဲဒီ သိစရာတွေ တတ်စရာတွေ အားလုံးထက် အသိပညာက အရေးကြီးဆုံးပဲလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မရှိတာခက် ဆိုတာကို ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အသိပညာမရှိတာကို ခက်တယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ အတတ်ပညာတွေ ဘယ်လောက်ပဲ တတ်တတ်၊ ဘယ်လောက်ပဲတော်တော် အသိပညာမရှိရင် အခက်ကြုံကြရတတ်ပါတယ်။ လုပ်သင့်တာ၊ မလုပ်သင့်တာ စဉ်းစားနိုင်တဲ့ အသိပညာမရှိတဲ့အတွက် ကိုယ့်အန္တရာယ်ကိုမမြင် ကိုယ့်ပညာကိုသာပြလိုတဲ့ ပညာမာန်ကြောင့် ဒုက္ခရောက်တတ်တဲ့ပုံပြင်လိုပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပုံပြင်ကိုတော့ မရေးလိုတော့ပါဘူး။ ပြောလိုတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ စဉ်းစားတတ်တဲ့ အသိပညာမရှိတဲ့အတွက် အလွဲတွေလုပ်ပြီး အစွဲတွေမချွတ်နိုင်တဲ့အပြင် ငါ မှ ငါ ပညာမာန်တက်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အသိပညာမရှိတာက ဥစ္စာပစ္စည်းမရှိခြင်းထက် အခက်ကြုံရတယ်လို့ ရေးသားလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
![mashitar htet 1.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmdBfauLbGWXXuyyWrXbH7MswnzifVRXnEh2sM46q1fRTt/mashitar%20htet%201.png)
ရေးလိုတဲ့အချက်ဖြစ်တဲ့ မရှိတာထက် မသိတာခက်ဆိုတာကို အတိုချုပ်အနေနဲ့ကတော့ အပေါ်မှာရေးပြခဲ့သလို ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း ကျွန်တော့်ရဲ့ အမြင်တစ်ခုသာဖြစ်တဲ့အတွက် မှန်ကောင်းမှ မှန်နိုင်ပါမယ်။ ဥစ္စာပစ္စည်း မရှိခြင်းထက် အသိဥာဏ်ပညာမရှိခြင်းက ပိုဆိုးတယ်လို့လည်း ခံယူတဲ့အတွက် ဒီစာတွေကို ရေးဖြစ်ခြင်းဖြစ် ပါတယ်။ မတူညီတဲ့အတွေးလေးတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် အောက်မှာ မန့်သွားနိုင်ပါတယ်။ အသိပညာ ဗဟုသုတတိုး တာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေဟာ ဆွေးနွေးဖို့အတွက်လည်း အလွန်ဝန်လေးတတ်တာမြင်ရပါတယ်။ ဆွေးနွေးခြင်းက ဗဟုသုတတိုးစေသလို အသိဥာဏ်ပညာလည်း တိုးပွားစေတယ်လို့ခံယူပါတယ်။ အတ္တမပါတဲ့ ဆွေးနွေးခြင်းမျိုးပေါ့လေ။ အတ္တပါလာတဲ့ ဆွေးနွေးခြင်းမျိုးကတော့ အသိဥာဏ်ပညာတော့မတိုးပဲ ရန်သူတိုးသွားနိုင်ပါတယ်။ အဲ-ဘေးချော်သွားပြီ။ ပြန်ဆက်တာပေါ့။ ဥစ္စာပစ္စည်းမရှိခြင်းက ရှိစုပေါင်းညီညွတ်တွေနဲ့ ရှိအောင်လုပ်ဖို့အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ အသိုင်းအ၀ိုင်းဆိုတာက ရှိစမြဲပါ။ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ကူညီထောက်ပံ့ပေးရင် ဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာရှိလာနိုင်ပါတယ်။ အသိဥာဏ်ပညာဆိုတာ ကတော့ အဲဒီလို အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေက ၀ိုင်းဝန်းကူညီပေးဖို့ မလွယ်ကူပါ။ ကိုယ်တိုင်က အသိဥာဏ်ပညာရှိဖို့ ကြိုးစားချင်စိတ်လိုလိုလားလားရှိပါမှ အသိဥာဏ်ပညာဆိုတာရရှိလာမှာဖြစ်ပြီး အသိဥာဏ်ပညာမရှိခြင်းက မိဘ ဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်း အပေါင်းအသင်းတွေအတွက် မျက်နှာမလှဖြစ်တတ်ပါကြောင်း ရေးသားရင်းဖြင့် ရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးသော စာဖတ်သူအပေါင်း မရှိတဲ့အဖြစ်ကလည်း လွတ်ကင်းကြပြီး မသိတဲ့အဖြစ်ကို ရှောင်ရှားနိုင်ကြပါစေ…
👍 esteemapp, curie, minnowsupport, mariusfebruary, camelot, good-karma, c-squared, vact, wackou, kevinwong, ansoe, arcange, hendrikdegrote, tombstone, tinhlaingoo, htwegyi, asterkame, mamamyanmar, billionairehein, mmunited, steemitboard, suhlaing, nyinyiwin, sawlwin, myintlwinsoe, uthantzin, lwanwai, macoolette, aggamun, eric-boucher, caesarsupaimin, myanmarkoko, hotsteam, massivevibration, choogirl, yaelg, diebaasman, rival, locikll, mhm-philippines, mindstabber, tensor, reaverza, drmake, didic, torico, nicephoto, pinksteam, zarzar1989, allcapsonezero, raphaelle, sarez, steemph.manila, mmcg, esteem.app, revo, schroders, alexworld, jiujitsu, combatsports, blewitt, iansart, kingorcasteem, liberosist, and 133 others
wackou0B 40,183,313,016 0.72%
tombstone0B 25,769,907,739 0.1%
drifter10B 116,493,245 1.2%
mindstabber0B 1,554,632,363 100%
lola-carola0B 186,033,778 1.2%
kevinwong0B 39,964,456,819 0.5%
eric-boucher0B 4,305,856,386 1.2%
anwenbaumeister0B 79,597,059 2.4%
good-karma0B 55,562,496,036 4.23%
arcange0B 35,896,333,851 3%
liberosist0B 581,031,801 2.4%
raphaelle0B 1,074,787,328 3%
mysteem0B 111,871,312 4.23%
psygambler0B 114,366,312 1.2%
demo0B 130,663,069 4.23%
feruz0B 397,166,116 4.23%
whoib0B 536,635,637 70%
curie0B 744,508,306,784 2.4%
hendrikdegrote0B 30,972,933,181 2.4%
vact0B 44,926,767,704 2.4%
dashfit0B 218,844,053 1.2%
esteemapp0B 828,330,560,456 4.23%
steemitboard0B 14,438,345,517 1%
gmedley0B 136,621,557 1.2%
camelot0B 61,303,603,601 100%
diebaasman0B 2,444,812,360 12%
moksamol0B 181,222,153 1.2%
choogirl0B 2,968,505,715 6.52%
martin.starosta0B 8,505,861 10%
iansart0B 683,063,407 1.2%
jiujitsu0B 860,795,618 1.2%
lekang0B 303,043,759 1.2%
minnowsupport0B 116,496,138,210 3%
zerotoone0B 202,783,067 1.2%
locikll0B 1,950,845,357 4.8%
aboutyourbiz0B 414,453,774 2.4%
cryptokrieg0B 386,793,146 2.4%
rival0B 2,239,967,591 2%
tensor0B 1,521,875,751 1.2%
caesarsupaimin0B 4,145,201,842 50%
flatman0B 99,344,624 2.4%
allcapsonezero0B 1,096,291,249 1.2%
hotsteam0B 3,499,616,662 10%
neumannsalva0B 328,737,774 1.2%
nyinyiwin0B 9,898,388,279 100%
ansoe0B 38,514,435,027 100%
mamamyanmar0B 16,669,917,643 100%
asterkame0B 18,734,272,524 100%
tinhlaingoo0B 23,371,985,084 100%
rye050B 108,201,374 1.3%
cepul0B 315,836,925 6.52%
revo0B 878,787,522 1.2%
massivevibration0B 2,997,642,836 5%
eurodale0B 79,255,009 1.2%
reaverza0B 1,270,945,212 15%
clweeks0B 69,179,342 1.44%
torico0B 1,174,337,433 3.26%
htwegyi0B 21,308,595,173 76%
dokter-purnama0B 119,889,093 1.2%
cryptononymous0B 242,480,947 1.2%
jlsplatts0B 540,596,456 1.3%
esteem.app0B 880,130,229 4.23%
peaceandwar0B 326,342,812 1.2%
lwanwai0B 6,913,093,420 80%
joendegz0B 121,728,519 1.2%
myanmarkoko0B 4,039,677,358 100%
ptcmyanmar0B 460,080,241 50%
shayekh20B 71,745,811 50%
steemph.manila0B 917,222,990 6.52%
pinksteam0B 1,151,387,049 10%
nicole-st0B 115,491,978 1.2%
teukurival0B 62,673,614 1.2%
drmake0B 1,262,787,774 1.2%
mhm-philippines0B 1,834,773,127 1.2%
xanderslee0B 90,944,726 2.4%
kenadis0B 236,446,127 1.2%
maticpecovnik0B 305,589,044 0.96%
onemedia0B 116,517,288 2.4%
thescubageek0B 117,221,877 1.2%
danaedwards0B 209,555,019 2.4%
stahlberg0B 471,762,802 1.2%
gabrielatravels0B 118,312,016 0.6%
reizak0B 163,685,798 0.96%
zlatkamrs0B 94,935,614 2.28%
uthantzin0B 7,832,823,656 100%
mattiarinaldoni0B 196,769,185 6.52%
suhlaing0B 13,205,077,712 100%
sawlwin0B 9,359,637,910 50%
shinedojo0B 223,862,586 2.4%
billionairehein0B 15,817,370,067 60%
trixie0B 76,850,605 10%
aggamun0B 5,640,232,577 50%
didic0B 1,253,739,556 1.2%
operahoser0B 161,241,045 0.36%
myintlwinsoe0B 8,978,148,282 100%
kingorcasteem0B 623,945,477 100%
oghie0B 545,199,898 50%
jbrrd0B 156,288,303 20%
ivan-g0B 271,649,916 1.2%
zipporah0B 480,156,316 0.48%
cryptofuwealth0B 92,274,401 11%
morbyjohn0B 52,108,562 7%
ambitiouslife0B 102,474,295 1.2%
positiveninja0B 237,278,124 1.2%
gabyoraa0B 311,537,797 6.52%
mini-zephalexia0B 129,211,148 3.38%
shwemon0B 200,671,570 100%
hiddenblade0B 196,971,655 1.92%
misia19790B 188,111,242 1.2%
mariusfebruary0B 70,289,028,483 0.48%
romeskie0B 518,699,471 6.52%
goodway0B 158,082,235 1%
zarzar19890B 1,109,769,840 100%
alexworld0B 872,026,568 50%
gracelbm0B 86,725,829 1.2%
niouton0B 77,357,732 0.48%
schroders0B 872,259,699 0.72%
inntagawgroup0B 109,945,485 100%
sarez0B 1,066,510,238 9.12%
longer0B 301,086,097 50%
blewitt0B 738,196,043 0.16%
kafupraise0B 179,945,825 50%
ilovecryptopl0B 293,051,615 1.92%
yomismosoy0B 290,533,725 50%
bflanagin0B 103,432,894 1.2%
yee9000B 219,583,766 50%
yestermorrow0B 182,038,981 0.72%
hansmast0B 140,503,539 1.2%
wallyt0B 69,900,676 0.96%
wstanley2260B 70,892,008 50%
gpcx860B 324,160,161 50%
copyseeker0B 246,923,587 50%
partitura0B 206,733,356 6.52%
yaelg0B 2,535,050,830 5%
tommasobusiello0B 79,483,253 1.2%
clement.poiret0B 106,234,317 2.4%
c-squared0B 50,866,267,420 13.04%
annaabi0B 123,039,873 1.2%
trang0B 183,874,666 1.2%
chickenmeat0B 103,633,767 1.2%
macoolette0B 6,883,644,088 1.2%
javier.dejuan0B 487,643,824 2.4%
mmunited0B 15,026,196,075 49%
reverseacid0B 159,441,108 1.2%
moemoe19980B 231,081,698 50%
ambercookie0B 81,861,076 90%
mmsupporter10B 219,271,634 50%
prometheus20B 224,742,479 50%
lucifier0B 219,048,740 50%
alvin06170B 152,799,826 1.2%
solarphasing0B 364,898,304 5%
lucifer20B 97,906,359 25%
mmcg0B 907,309,562 50%
ascorphat0B 240,845,661 2.5%
herculean0B 61,549,908 50%
combatsports0B 793,465,756 2.4%
chrisluke0B 121,997,719 26%
nicephoto0B 1,154,333,498 1.92%
theinspiration0B 70,993,303 100%
epic4chris0B 71,168,768 100%
idlejack0B 216,711,870 20%
alfatron7770B 104,967,573 0.96%
cojp0B 63,646,370 50%
@billionairehein · May 12 '19
ရေးချင်တာရေး ဖတ်ချင်သူဖတ် 😁😁😁
@ansoe · May 12 '19
@uthantzin · May 12 '19
"မရှိတာထက် မသိတာခက်တယ်"ဆိုတာကို သေသေချာချာလေးပြောပြပေးထားတာ  ကောင်းမွန်လှပါတယ်။မှတ်သားစရာ ကောင်းသော post လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
@htwegyi · May 12 '19
မသိတာထက် မသိမှတော့ မရှိတော့ဘူးပေါ့လေ
အဲလို ဆက်နွှယ်ပတ်သက်နေတာပဲနော် ကိုထွေးကြီး
@minnowsupport · May 12 '19
@suhlaing · May 13 '19
@zarzar1989 · May 13 '19
မသိတာထက် မလုပ်တာ ခက်
You're welcome @ansoe
Haveagood day!<br><sub><a href="https://steempeak.com/steemreply/@arcange/introducing-steemreply-stay-in-touch-with-your-steem-network">Posted with <img src="http://steemreply.com/logo-comment.png"/></a></sub>